Warhammer Odyssey na-abịa gam akporo n'oge na-adịghị anya, ndebanye aha dị | Gam akporosis
Guysmụ nwoke ndị na-elekọta nnukwu ndị dike Celtic ha na-ahụ maka mmepe nke Warhammer Odyssey, Ezigbo MMO nke ga - akpọrọ anyị mee ka anyị cheta ihe ọhụụ nke cientwa Ochie si na ekwentị anyị.
Warhammer Odyssey ugbu a ị nwere ndebanye aha mbụ na weebụsaịtị gị ya mere ị nwere ike tinye email gị wee si otú a nata ọkwa nke nnweta ya ụbọchị anyị nwere ike iwunye ya ma nwee mmasị na MMO na, site na usoro ọmụmụ ndị dike Celtic, agaghị abụ otu n'ime ndị ahụ na-agwụ ike freemium gacha.
Na Warhammer Odyssey ị nwere ike ịchọpụta ebe ihe odide akara ngosi sitere na ụwa efu nke Warhammer na nke ị nwere ike ịnụ ụtọ ọdịnaya nke ga-agbasawanye oge na mmelite mgbe niile. Site na ihe o yiri na mbụ, oge a anyị ga-enwe egwuregwu ruo ogologo oge ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịkụ igodo ziri ezi iji dọta ọtụtụ puku ka ha n'obi.
Ya mere, anyị nwere ike lee na ndebanye aha, a ga-enwe klas 6 ịhọrọ- Demon Hunter, Ọkachamara, Paladin, Engineer, Shadow Warrior, and Assassin. Classesfọdụ klas ndị dị ugbu a afọ ole na ole gara aga na Warhammer Online maka PC.
Ewezuga imepụta agwa anyị, anyị nwere ike isonye n’òtù dị iche iche, nwee njikọ ọhụrụ ma banye na ahia Marienburg site na ụlọ ahịa ya. Anyị nwere ike ịghọta na ọ bụrụ na ahia bụ akụkụ dị mkpa nke egwuregwu ahụ, ha ga-ahapụ ndị egwuregwu ka ha kee ihe ha iji zụọ ahịa ...
Ọhụrụ MMO na-abịa ngwa ngwa gam akporo yana na inweela peeji ndebanye ndebanye gị mbụ. Anyị amaghị ihe ha ga-enye gị iji debanye aha gị, ma ọ dịkarịa ala, ị nwere ike ịbanye igwu egwu site na nke mbụ. Anyị na-ekwu maka ndị njikwa nke ndị dike Celtic, MMO nke na-eweta ihe WoW bụ na ekwentị mkpanaaka yana n'ụzọ dị ukwuu; dị nnọọ ka anyị na-eche nnukwu EVE ikwughachi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ee, ị ga-enwe ezigbo MMO yana Warhammer Odyssey nke dị na mmepe